टोगफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमको साथ सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्नुहोस् - आईटीटी टेक स्कूल
Togaf प्रशिक्षण पाठ्यक्रमको साथ सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्नुहोस्
पाठ्यक्रम तागफ को हाइलाइट्स:
टोगाफसँग प्रमाणित कसरी गर्ने?
TOGAF ® आईटीसँग व्यापार संरेखित गर्न आर्किटेक्टहरूको लागि Defacto प्रमाणीकरण भएको छ। संख्याहरू आफैंलाई विश्वभर भर प्रत्येक वर्ष प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जान्छ। यो "द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क" को लागि एक संक्षिप्त शब्द हो - यो EA कार्य प्रदर्शनका लागि उद्योग-मानक पद्धति र ढाँचा हो र एक पुरा गरी प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ? यो सुनिश्चित गर्नुहोस कि यस्तो पहलहरु को प्रभारी परिवर्तनों को नग्नताहरुलाई बुझें जहां सही अनुपात मा मान्छे, प्रक्रिया र प्रौद्योगिकी कौशल को एक संयोजन निरंतर सफलता सुनिश्चित गर्न सक्छन्।TOGAF® 9.1 फाउन्डेशन (लेवल 1) रTOGAF® 9.1 प्रमाणित (स्तर 2)द्वारा प्रशिक्षण अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान कर्पोरेट प्रशिक्षणको लागि राम्रो समाधान हो, गुडगाँवमा राम्रो सुसज्जित प्रशिक्षण कोठाहरू र भारतभरि भर पर्दा।
चपलता र वास्तुकला दुई पाङ्ग्राहरू हुन् जुन तपाईंको संगठनले ब्यालेन्समा अगाडि बढाउँछ। उनीहरूको संगठनको लागि काम गर्ने सही सन्तुलन के हो? तपाईं कसरी यो ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ र एकै समयमा व्यापार परिणामहरू प्राप्त गर्दा, परिवर्तनहरू र सँधै सरल रूपमा तपाईंको संगठन आईटी लक्ष्यहरू पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। कार्यशालाले उनीहरूलाई कुनै पनि संगठनमा यी दुई चिन्ताहरू कसरी संलग्न गर्न मद्दत गर्नेछ।
TOGAF परिभाषित गर्दै: TOGAF एक ढाँचाको रूपमा छोटो तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ जसलाई एक तरिकाले तपाईको वास्तुकला व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्दछ जब AS को बाट चलिरहेको छ। AS तपाईंको वर्तमान आईटी परिदृश्यबाट केहि प्रगति हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो मिशन पूरा गर्न आफ्नो व्यवसाय यात्रा मा कहीं पनि हुनेछ र तपाईं त्यहाँ सबै हेरचाह चपलता प्राप्त गर्न कसरी जानुहुन्छ र तपाईको माइलस्टोन र लागतमा नचिनेको छैन।
यो अनुभवबाट जान्छ कि त्यहाँ आईटी परिवर्तनमा कुनै पनि चाँदीको गोली छैन, प्रत्येक ग्राहक आफैमा अध्ययनको रूपमा लिन सकिन्छ। ठूलो पोर्टफोलियो, अझ गाह्रो यो समूहमा सीधा जैकेट हो। अनुभव ग्राहकको साथ हिडेर आउछ। Togaf प्रशिक्षण तपाईं प्रशिक्षित धेरै कैसीशियुसहरू Eturnti इन्टरप्राइज परामर्श र हाम्रो प्रशंसापत्रको लागि एकचोटी बाट मान्यता प्राप्त कार्यशाला बढाउनेछ।TOGAF आर्किटेक्चरहरूलाई एक तरिकाको लागी जो परिपक्व संस्थाहरूले प्रयासको रूपमा प्रयोग गरेको छ र परीक्षणको राम्रो अभ्यास र यसले कमाई गरेको छ। भाग्य सूची मा धेरै कम्पनीहरु को यो ठूलो मात्रा मा उनलाई उनको स्ट्याक सूट र आफ्नो पीठ अंक, समस्याहरु को हल गर्न को लागी प्रयोग गरे।
पाठ्यक्रम लिनु पछि Togaf प्रशिक्षण, तपाईं चपलता संग मिल्दैन कि कसरी वास्तुकला यो सम्बन्धित छ। आर्किटेक्टरको समाधानको लागि धेरै उपयोगी, क्यारेक्टर वास्तुकारको रूपमा तपाईं आफ्नो क्यारियर मार्गको साथ र व्यवहारमा टोगफ ईए ढाँचा कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ। TOGAF 9.1 को व्यावहारिक ज्ञानले तपाईंलाई TOGAF प्रमाणीकरण खाली गर्न र TOGAF 9.1 प्रमाणित वास्तुकार बन्न मद्दत गर्नेछ। एक मामला अध्ययन कोर्स को माध्यम ले चलान हुनेछ जो तपाईंलाई TOGAF 9.1 को उपयोग को लागी व्यावहारिक पक्ष र तपाईंको संगठन को लागि मदद मिलेगी।
एक अध्ययन अध्ययन वास्तविक जीवन को अवधारणाहरु सह-सहन गर्न को लागी सबै पाठ्यक्रम चलिरहेको छ जस्तै puzzles, crosswords र quizzes को साथ बक्स गरिएको गतिविधि सत्रहरु संग सत्र को समयमा सिकन को लागि उन्नत सिकन अनुभव को लागि बाटो को दोहराने को दोहराने को लागि।
Togaf प्रशिक्षणमा उम्मेदवारहरूको पास धेरै प्रतिशत भएको छ र धेरै नकली परीक्षाहरू र अन्तरक्रियात्मक सत्रहरूले उम्मेद्वारलाई आत्मविश्वासको प्रमाण प्रमाणित गर्न राम्रो तरिकाले तयार पारेको छ।
आईटी र व्यवसाय एकताबद्ध गर्न TOGAF ढाँचा किन प्रयोग गरिन्छ